Siri iyo Rock, oo ka mid ah xayeysiisyada loogu daawashada badan yahay YouTube sanadkii 2017 | Waxaan ka socdaa mac
Siri iyo Rock, oo ah mid ka mid ah xayeysiisyada loogu daawashada badan yahay YouTube sanadkii 2017
Ma xasuusataa goortii badhtamaha sannadka Siri ayaa ku jilay muuqaal xayaysiin ah oo ay weheliso xiddig Dwayne Johnson (The Rock)? Intaa kadib xitaa waxaa lagu xantaa in Apple ay amartay filim uu jilaagu la jilayo kaaliyaha shaqsiyadeed ee caanka ah ee Cupertino.
Ma jiraan wax runta ka sii fog: taasi waxay ahayd kaliya wada shaqeyn ka dhexeysa jilaaga - iyo halgamaa xirfadle ah - oo uu la lahaa shirkadda Apple oo uu doonayay inuu ku dhiirrigeliyo kaaliyaha macmalka ah. Waa run in xayeysiintu aysan ka mid ahayn kuwa ugu fiican ee aad ka heli karto. Si kastaba ha noqotee, kuwa jecel sida uu jilaa ugu ciyaarayo filimadiisa (ficillada ugu badan), waxay u ahayd soo jiidasho.
Xayeysiintaas Siri wuxuu ka caawinayay The Rock inuu gaaro himilooyin noloshiisa ah. Ka dib markii 'lagu xujeeyay' telefishanka si loo helo hawlo maalinle ah, Jilaagu wuxuu bilaabayaa inuu adeegsado kaaliyaha dalwaddii isagoo adeegsanaya iPhone 7. Waxa ugu horeeya waa inaad hubiso inta caqabadood ee aad qortay noloshaada. Taas ka dib, muuqaalada kala duwan midba mid buu u xigaa.
Apple waxay dooneysay inay siiso muhiimad dheeraad ah Siri kadib markay arkeen sida tartamayaashu ugu baneeyeen caawiyeyaashooda (Google, Amazon ama Samsung ayaa kamid ah). Waxaa intaa dheer, shirkadda ganacsiga ee internetka waa midka hogaaminaya qaybtan mahadnaqa Alexa. Laakiin markaan ka tago tan, iyo riwaayadaha The Rock ee xayeysiiska, waxay umuuqataa in Apple ay ku guuleysatay wixii ay raadineysay: ku xirnaanta internetka. waa mid ka mid ah 10ka xayeysiis ee loogu daawashada badan yahay YouTube-ka sanadkan 2017.
Si aad u noqoto mid sax ah, Xayeysiintan Apple waxay ku qaadataa kaalinta sideedaad iyadoo wadar ahaan aragtidiisu dhan tahay 25,3 milyan, sida ay nooga sheegaan bogga AdWeek. Sidoo kale, booska ugu sarreeya wuxuu aadaa tartanka: Samsung ayaa kaalinta koowaad ku leh in ka badan 150 milyan oo aragtiyo xayeysiis ah oo ku saabsan adeegga macaamiisha ku saleysan gawaarida ee Hindiya. Xusuusin ahaan, Isbaanishka ku dhawaaqida Apple ee Rock iyo Siri waa fiidiyowga loogu daawashada badan yahay kanaalka rasmiga ah ee Apple Spain sanadkan oo leh qiyaastii 3 milyan oo aragti ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Siri iyo Rock, oo ah mid ka mid ah xayeysiisyada loogu daawashada badan yahay YouTube sanadkii 2017
Cryptex, barnaamij ogeysiis lacag la'aan ah oo bilaash ah wakhti xaddidan
Deus Ex: Bini-aadamka La Qaybiyey ayaa imanaya macOS bishii Diseembar 12